PressReader - Ilanga: 2017-10-09 - ZIKHALA NGOKUNGAVIKELEKI IZISEBENZI ZASEZIBHEDLELA
ZIKHALA NGOKUNGAVIKELEKI IZISEBENZI ZASEZIBHEDLELA
Ilanga - 2017-10-09 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU skhom@ilanganews.co.za
SIMAPEKETWANA isimo esibhedlela saKwaHlabisa, enyakathompumalanga yeKwaZulu-Natal, osekuphele amasonto imishini yokuwasha ingasebenzi. Kubikwa ukuthi kuphela izinsuku cishe ezintathu amalineni embondelene engawashiwe ngenxa yalesi simo.
Umthombo weLANGA ongaphakathi kulesi sibhedlela, uthi lokhu kubeka impilo yezisebenzi engcupheni njengoba amashidi ehlala namagciwane isikhathi eside engahlanziwe. Uthi abaphathi balesi sibhedlela bayazi ngale nkinga kodwa kakubonakali mehluko.
Ngokujwayelekile uma kuzowashwa izimpahla okuhlanganisa namalineni, kuyaye kuthathe usuku olulodwa kodwa njengoba imishini ifile, kuphela cishe izinsuku eziyisihlanu zingawashiwe, ngokusho komthombo.
“Lesi simo kasisihle neze ikakhulukazi kulaba abasebenza lapho kuwashwa khona izimpahla zesibhedlela. Izimpahla zisuke zingcolile futhi kade zilele abantu abagulayo noma abalimele, uma zihlala zimbondelwe ndawonye, lokhu kakukuhle neze kumuntu osuke esebenza lapho ngoba kunamagciwane. Kabafuni nokuba ziyowashwa kwenye indawo lezi zingubo,” kusho umthombo.
Uthi lesi sibhedlela sinemishini eyisi-8 esetshinziswayo kodwa njengamanje kusebenza emithathu kuphela.
“Kule mishini esebenzayo, kukhona owodwa wokuwasha, omunye ngowokomisa izimpahla owesithathu ngowoku-ayina kanti wona kawusebenzi. Njengoba zingasa-ayinwa nje, lokhu kuchaza ukuthi zibuyela emuva namagciwane, okubeka iziguli engcupheni yezifo.
“Ngokuzwa kwami, kukhona inkampani eqashiwe ukuba ilungise le mishini kodwa kakucaci ukuthi yini ebambile. Siyacela ukuba umnyango ungenelele kulolu daba ukuze izolungiswa,” kusho umthombo.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uMnu Sam Mkhwanazi, uthi lesi sibhedlela sinenkontileka nenkampani enakekela imishini ukuze isebenze kahle. Uthi ngesikhathi ibhekwa imishini, kutholakale ukuthi kukhona okudinga ukulungiswa, njengamanje inkampani eyenza lo msebenzi imatasa iyayilungisa.
Uphikile ukuthi amalineni ahlala izinsuku ezingaphezulu kwezintathu engawashiwe. Uthi amasha ayahanjiswa njalo emawodini nsuku zonke.
Uveze ukuthi lesi sibhedlela sinamalineni enele kanti uma kwenzekile ashoda, zikhona ezinye izindlela zokuba kusetshenziswe indawo yokuwasha esibhedlela esiseduze.